XYZtoCAD, Isku-duwanaashaha shaqada ee AutoCAD - Geofumadas
Febraayo, 2011 AutoCAD-AutoDesk, topografia, Video
AutoCAD keli ah ma keeneyso waxyaabo badan oo ka shaqeynaya isku-duwayaasha ama abuurista jadwalka dhibcooyinka. 3D miyay samaysaa, laakiin qaybta aasaasiga ahi ma'aha, markaa marka aan u shaqeyneyno isku-duwo ay soo saaraan saldhigga guud, GPS ama saamiga waa inaanu ku fekernaa macaas halkaas ku waraabiyey.
Laakiin XYZtoCAD ma aha macruuf fudud, waa qalab lagu dhisay habka loo yaqaan 'logic work', oo leh ikhtiyaarka si loo casriyeeyo internetka. Maxaa dhacaya waa sababta oo ah waa bilaash, qofku wuxuu yareeyn karaa suurta galnimadiisa, waqtigaan xeeladaha xidhiidhsan ee ka wanaagsan tan calaamadaynta, way adagtahay in la dhigo.
Ku rakib XYZtoCAD
Cunsuriyeha waxaa laga soo dejiyey programacionautocad.com, ka dibna la toogtay, kaaliyana waa la raacayaa. Ugu dambeyntii, waxa ay na weydiisay nooca loo yaqaan "AutoCAD installation" waxaan dooneynaa in aan ka shaqeyno. Xaaladaha qaarkood, talaabada kama dambaysta ah looma dhicin, waxaana badanaa sabab u ah in uu haysto liis shuruuda leh ee diiwaangelinta nidaamka -ama budhcadbadeed, sida aad rabto inaad u wacdo-
Haddii ay dhacdo dhibaatooyinka rakibida, saaxiibada CADnet waxay soo jeediyeen waxyaabahan soo socda:
1 Fur AutoCAD
2. Waxaad ku qortaa khadka taleefanka: netload kadibna aad gasho
Wixii AutoCAD 2010-2011 dooro faylka
Wixii AutoCAD 2007-2008-2009 dooro faylka
Sida aan aragno, qalabkani wuxuu ku shaqeeyaa noocyada 2007 illaa AutoCAD 2011 iyo sababta oo ah waxaa la dhisay .net waxaan u qaadan karnaa in ay sidoo kale ka shaqayn karto AutoCAD 2012 in dhowr bilood la sii deyn doono.
Qaadan fursaddan si aad u sheegto inaad ka soo dejisan karto AutoCAD 2012 bilaash, laga bilaabo xidhiidhkan, hadda ee beta ee ujeedooyinka imtixaanka, waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso.
Furo menu XYZtoCAD
Marka la rakibo, waxaa lagu hawlgeliyaa khadka taleefanka adigoo galaya
Markaad soo gashid, liis cusub oo la mid ah midka lagu muujiyay sawirka waa inuu ka muuqdaa bararka sare.
Haddii aynaan rabin in aan aragno menu, waa wax aan firfircoonayn amarka
Waxaa suurtogal ah in marka la rakibayo version horayba u jirtey mid cusub, waa la cusbooneysiin karaa iyadoo la adeegsanayo amarka
Soo dejinta dhibcaha Excel
Tani codsigaan wuxuu ka shaqeeyaa qurxinta guddi fudud. Faylka 'txt' ayaa la doortaa, amarka uu xogtaagu yahay, haddii aad rabto inaad ku dhejiso dhibcaha ama blockska. Cabbirka dhibic, lakab halkaas oo ay ku badbaadi doonaan oo diyaar noqon doonaan.
My ixtiraamka u ah saaxiibada ee CADnet.es in la ciyaaro this by la raffled.
Waxaa jira badhafo aan u muuqan in ay halkaas joogaan, sida daawashada xogta, taas oo kuu ogolaaneysa inaad horay u eegto miiska la soo dhoofiyo. Sidoo kale ikhtiyaarka ah inaad doorato qaabka dhibicda mid ka mid ah.
Oo markaad barbar dhigto dhibcaha, badhanka ayaa la bilaabaa si loo abuuro miiska. U baahan tahay inaad u sheegto meesha uu geeska bidix ee sare, aqbala style miiska abuuraa dhowr dhacdo in ay badan yihiin (100 dhibcood per page) iyo click abuuraa miis oo ay ku jirto aqoonsiga, easting, northing, sare u qaadis iyo xagal in dhibicda xigta. Wanaagsan ee dib u fikirka, inkasta oo aan haysto qadarin ku saabsan faa'iidada xogta xaglaha.
Jihada ka soo horjeeda, waa isku mid. Waxaa laga dooran karaa blocks ama dhibco, laga bilaabo a lakabka ama xulashada hay'ado. Kadibna waa inaan kuu sheegno sida aan u rabno in la tiriyo, tirada jajab tobanle, halkaas oo faylka txt la keydin doono oo diyaar noqon doono.
Dabcan, faylka "txt" waxaa laga furan karaa Excel, wax aan ka badneyn barta shabakadda, laakiin soo galaya Excel iyo doorashada ikhtiyaarka dhammaan faylasha. Ka dib kaaliyaha wuxuu naga qaadaa talaabo tallaabo illaa laga soo saaro miiska. Sida miis ayaa loo kaydin karaa qoraalka oo ka soocaya astaamaha ama shaxanka, oo leh daryeel ku yaal xaashida kowaad oo aan lahayn unugyo isku dhafan ama waxyaabo noocyo kala duwan ah.
Waxaan ku dhuftey badhanka u oggolaanaya in uu joojiyo nidaamka, tallaabo laga yaabo in ay lagama maarmaan tahay haddii aad la shaqeyn doonto tiro aad u farabadan ama haddii aad jadwal weydo.
Waa hagaag, waxaa jira. Sida ugu fiican ee aan u arko codsiyada bilaashka ah ee sahaminta iyadoo la adeegsanayo AutoCAD.
Halkan waxaad ka arki kartaa fiidiyowga lagu duubay YouTube.
Post Previous«Previous gvSIG Fonsagua, GIS ee naqshadaha biyaha
Post Next AutoCAD 2012 Goorma?Next »
8 Waxay ku jawaabeysaa "XYZtoCAD, iskuduwaha shaqada ee AutoCAD"
Ma aqaan haddii codsigaasi uu ka shaqeynayo AutoCAD 2013
fernip isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ku dhajiyay AutoCAD Civil 3D 2013, raacay tabobarka, laakiin ma aanan helin natiijooyin wanaagsan. Waan jeclaan lahaa haddii aad iiga sheegi karto sida aan u samayn karo shaqada XyzToCad. Waad ku mahadsan tahay
BARNAAMIJKA waa mid fiican KAARKA aad u wanaagsan WAA A DSHISKA aad u faa'iido badan, laakiin waxaan dhibaato ka qabto blocks ka doonayaa in dhoofinta iyo sifooyinka aan heli qalad this muran ku qeexan ahaa out of kala duwan ee qiimaha sax ah, maadaama ay tani u xaliyo laga yaabaa in
WAAD KU UGU QEYBSANAYO QIIMEYNTA
1 isagu wuxuu leeyahay:
CADnet isagu wuxuu leeyahay:
Hadda waxaad soo dejisan kartaa qaybta cusub ee XyzToCad v.2a
01-Codsiga Daabacaadda Macluumaadka ee Faylka Excel, Txt, Xml, Html.
02-Codsiga Codsiyada Macluumaadka laga soo diro faylka Excel ama Txt.
03-Muhiim maahan in Excel lagu rakibo mishiinka isticmaala.
04-Waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhoofiso dhamaan wixii isku-dhafan iyo liistadooda.
05-Waxa loo oggol yahay in la soo dhiso tiro badan oo sifooyin ah (Aqoonsi, Qeex, Z, iwm)
06-Tilmaamida Miisaanka Area ee Xulashada Block.
07-Muraayadaa miiska saqafka leh muuqaalka xajmiga.
Heer sare ah. Waad ku mahadsantahay caddeynta ku saabsan rakibaadda.
Waxaan u maleynayaa in kaalin weyn ay tahay horumarinta mustaqbalka.
Ma xuma haddii ay tixgeliyaan ikhtiyaarka dhismaha polygonal. Waxaa loola jeedaa, ku dar amar pline, kaas oo abuuraya dariiqo polyline sida ay u kala horreeyaan dhibcaha. Waa baahi aad loo dareemay, in kastoo aysan khusayn goorta waxa aad haysataa ay tahay daruur ka mid ah qodobbada gudaha laakiin haa, adeegsiga dadka qaar ayaa siin doona codsigan si ay u sawiraan wareega laba-cirifoodka.
Haddii ay jirto dhibaato la socota saaxibbada rakibida, waxaa loo sameyn karaa gacanta, POST soo socda ayaa lagu tilmaamayaa sida
Marka laga hadlayo xaglaha, miiska saadaasha dhibcaha, waa run
taas oo aan loo baahnayn, xogtu waxay ku haboon tahay blockska. (Waxaa wax laga beddeli doonaa nooca xiga).
Iyadoo la tixraacayo wanaajinta qaabka soo socda ayaa ah sida soo socota.
-Macluumaadka Aaladaha ka soo baxa warqad si toos ah (Looma baahna inay leedahay Excel lagu rakibay kombiyuutarka)
- Ku dhufo Excel iyo HTML
- Waxaa la ixtiraamey foomka Warfaafinta.
Salaan iyo mahadnaq !!! by maqaalka.